Yan Aung: July 2007
ညဖက်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ သတင်းလေးတွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ ဒီသတင်းလေးတစ်ခု လာတွေ့ရတယ်. စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ. အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ တာလီဘန်တွေက ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့ ကိုးရီးယားလူမျိုး ၂၃ ယောက်ထဲက ဒုတိယတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်ပြီတဲ့. Andar ခရိုင်ထဲက Arizo Kalley ရွာလေးရဲ့ လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ အသတ်ခံရသူရဲ့ အလောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်. အဲဒီ့နေရာက Ghazni မြို့ရဲ့ အနောက်ဖက် ၆ မိုင်အကွာမှာ ရှိတာပါ.
အသတ်ခံရသူကတော့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ Sim Sung Min ဖြစ်ပါတယ်. ဘောင်းဘီအဖြူရောင်နဲ့ ညှပ်ဖိနပ်လေးတစ်ရံစီးထားပါတယ်တဲ့. မျက်နှာမှာ သွေးတွေရွှဲနေသလို သူလဲကျနေတဲ့ နေရာမှာလည်း သွေးအိုင်တွေအပြည့်နဲ့ပဲတဲ့.
အာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရဟာ သူတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ တာလီဘန်သူပုန်တွေကို မလွှတ်ပေးလို့ သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ ကိုးရီးယားသာသနာပြု အဖွဲ့ဝင်တွေထဲက အမျိုးသားတစ်ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့မှာ သတ်ပစ်ဖို့ တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ တာလီဘန်သူပုန်အဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Qari Yousef Ahmadi က ပြောသွားပါတယ်.
မူရင်းကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ. အဘန်းခံထားရလို့ မဖတ်နိုင်တဲ့ စာဖတ်သူများအတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်. ဓာတ်ပုံကိုတော့ screenshot နဲ့ ရိုက်ယူလိုက်ပါတယ်. အသတ်မခံရသေးတဲ့ ကျန်ရစ်သူတွေအတွက် လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ.
GHAZNI, Afghanistan - Police at daybreak Tuesday discovered the body ofasecond South Korean hostage slain by the Taliban, officials said. A purported Taliban spokesman had said the hostage was killed because the Afghan government failed to release imprisoned insurgents.
The Al-Jazeera television network, meanwhile, showed footage that it said was seven female hostages in Afghanistan. The victim's body was found on the side of the road in the village of Arizo Kalley in Andar District, some6miles west of Ghazni city, said Abdul Rahim Deciwal, the chief administrator in the area.
The Taliban has set several deadlines for the Koreans' lives. Last Wednesday the insurgents killed their first hostage,amale leader of the group. The body of pastor Bae Hyung-kyu arrived back in South Korea on Monday, where the families of the remaining hostages pleaded for their loved ones' release.
It's not clear if the Afghan government would consider releasing any militant prisoners. In March, President Hamid Karzai approvedadeal that saw five captive Taliban fighters freed for the release of Italian reporter Daniele Mastrogiacomo. Karzai, who was criticized by the United States and European capitals over the exchange, called the tradeaone-time deal.
ငါကတော့ အချိန်တစ်ခုကို စောင့်နေခဲ့တယ်
ငါဘာတွေ မှားခဲ့မိလဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တော့
တီတီတာတာ မင်းစကားသံတွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ပေမယ့်
ချစ်သူ့ခြေရာဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်ဖုိ့မှ မလွယ်ကူခဲ့တာ
ဒီတစ်ခါ ရေလှိုင်းသံကြားရင် ကမ်းစပ်ကိုပြေးဆင်းမယ်
အနှစ်နှစ်အလလက သိမ်းဆည်းထားတဲ့ နှစ်ချို့အလွမ်းများကိုလည်း
ငါကတော့ ဒီရေတက်လာမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေဆဲပဲ…
ဟိုမှာ ရေလှိုင်းတစ်လုံး ၀ုန်းခနဲ ချဉ်းကပ်လာခဲ့ပြီ
လင်းအရုဏ်ရဲ အားမာန်တွေနဲ့ အတူလေ
လူဆိုတာ လဲကျတိုင်းပြန်ထနိုင်ရမယ် မဟုတ်လား…
၀ိုးတ၀ါးမြင်နေရတဲ့ လမ်းစကို ယုံကြည်စွာပဲ နင်းဖြတ်ခဲ့တယ်
မြန်မာပြည်က ကလေးတွေ ကြက်ဆူစေ့စားမိပြီး အဆိပ်သင့်နေကြတယ်တဲ့.
အပြည့်အစုံကို သိချင်ရင် ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ.
တို့ရဲ့ မန္တလေးက ကျောင်းတော်
လွမ်းမိတယ် ဟိုးတုန်းက မန္တလေးညရေ
ဟိုးတုန်းက မန္တလေးညတို့ ပျော်ရင်
မိုးလင်းခဲ့ အပေါင်းအဖော်များ ၀ိုင်းဖွဲ့ရင်း
ရောင်းရင်းတွေ ဆိုတဲ့ သီချင်းး
ပြီးဆုံးပြီ ဟိုးတုန်းက မန္တလေးညရေ
နေ့များစွာ အဝေးဆုံး ဝေးလို့သွား
ဒီဘ၀ရဲ့ ညတွေ ကျောင်းတော်မှာ ကျန်ရစ်…
တမ်းတတယ် ဟိုးတုန်းက မန္တလေးညရေ
ပြည်ပပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခုကို မဂျစ်တူး ဦးဆောင်ပြီးတော့ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တည်ထောင်လိုက်ကြပါတယ်. ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
မန္တလေးမှာ Live Blog Show လုပ်နေတယ်. ဒီမှာ သွားဖတ်ပါ.
Seminare ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို အသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဖတ်ပါ.
ငါ့ရဲ့အတ္တတွေနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်နေခဲ့တယ်လေ
တစ်နေ့တော့ ဒီအခွံကို ငါစွန့်ခွာသွားရမှာပါ
ငါကြီးထွားလာလို့ ဒီအခွံနဲ့ မသင့်တော်တော့တာလည်း ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မယ်
ရန်သူတွေကို ငါကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်လာနိုင်လို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
နောက်ထပ်အခွံသစ်တစ်ခုကို ငါလိုချင်လို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.
ငါကိုယ်တိုင်က ဒီအခွံကို စွန့်ခွာသွားချင်လို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.
တစ်နေ့တော့ ငါဒီအခွံကို ထားရစ်ခဲ့မှာပဲ.
အကောင်းဆုံးနဲ့ ပြိုင်ဖက်အကင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်သွားချင်တယ်
တွေ့တဲ့ အခွံထဲကို ငါမ၀င်ချင်ဘူး
ရထားတဲ့ အခွံကိုလည်း ဖြစ်သလို ပစ်မထားချင်ဘူး
ငါ့ကို လွှမ်းခြုံထားတဲ့ အခွံဟာ
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ. ပြောစရာလေး နည်းနည်းရှိလာလို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်သွားတယ်ဗျ. အားလုံးအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်. ဘာလဲဆိုတော့ Cbox ထဲမှာ ပေါက်ကရ လာပြောသွားသူတွေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ကိုယ့်အချင်းချင်းပါ အထင်အမြင်လွဲစရာလေးတွေ ဖြစ်လာတာ တွေ့နေရလို့ပါ.
ဒီပြဿနာက အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး. Cbox တပ်ထားတယ်. ဘယ်သူမဆို ၀င်ရေးလို့ ရတယ်ဆိုမှတော့ ရေးချင်တဲ့သူတွေက ရေးချင်တာတွေကို ရေးပြီပဲပေါ့ဗျာ. အလကားနေရင်း ကိုယ့်ကို ၀င်ပြီး မေတ္တာပို့သွားသူတွေ၊ ဒါမလုပ်သင့်ဘူး၊ ဒါလုပ်သင့်တယ် ဆိုပြီးတော့ ဩ၀ါဒ ခြွေသွားတတ်သူတွေလည်း ရှိတတ်တာပဲ.
ပုံမှန်အရဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သိပ်ပြီး ခေါင်းခြောက်ခံမနေပါဘူး. အဲဒီ့ IP ကိုကြည့်တယ်. ဘယ်ကလာလဲပေါ့. ပြီးရင် msg ကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်. ဒီလောက်ပါပဲ. Cbox တပ်ရင် ဒီလိုပြဿနာလေးတွေ တွဲပါလာတတ်တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး လက်ခံထားပြီးသားပါ.
ဒါပေမယ့် မနေ့ကတော့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျ. ကျွန်တော့်နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ချို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ နာမည်ရင်းကိုမဖော်ဘဲ လူတစ်ယောက် စာဝင်ရေးသွားတယ်.
abcdefghijklmnopqrstuvwxy: v+shifd+; y+shifj ကို zawgyi လက်ကွက် ဖြင့်ကြည့်
ပုံမှန်အရဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို တစ်ယောက်ယောက်က မဟုတ်ကဟုတ်က လာရေးတယ်. ဖျက်ပစ်မယ်. ဒီလောက်ပါပဲ. ခုဟာကတော့ ကျွန်တော်သိတဲ့ ဘလော့ဂါ ၅ ယောက်လောက်ကို (ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့) အချိန်အားဖြင့် သိပ်မကွာဘဲ ၀င်ရေးသွားတာ.
ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ၀င်လုပ်သွားတာဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်.
အဲဒီ့ msg ကို ကျွန်တော် အလုပ်မသွားခင်လေးမှာ ဖတ်လိုက်ရတာ. စိတ်ထဲ ထောင်းခနဲ ဖြစ်သွားပြီးတော့ ချက်ချင်းပဲ အဲဒီ့ user IP ကို ဘယ်ကလာလဲဆိုတာတောင် ကြည့်မနေတော့ဘဲ Ban လုပ်ပစ်လိုက်တယ်. Msg ကိုလည်း ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်. ညဖက် ပြန်လာမှပဲ ဒီကိစ္စကို ဆက်ရှင်းမယ်ဆိုပြီး တေးသွားလိုက်တယ်.
ပြန်ရောက်တော့ Gtalk မှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ chat လုပ်ဖြစ်တယ်. သူတို့က အဲဒီ့ IP ကို Track လိုက်ကြည့်ပြီးသွားပြီလေ. အားလုံးတိုက်ကြည့်တော့ IP က တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေတယ်. ဒါအံ့ဩစရာလား.
ဒါပေမယ့် အံ့ဩစရာတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျ.
အဲဒီ့ IP က ကျွန်တော်တို့နဲ့ သိပ်ကိုရင်းနှီးတဲ့ ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ IP ဖြစ်နေတယ်.
ဒါလုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး. ဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူး. ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းလည်း မရှိဘူး…
စိတ်ထဲမှာ စိတ်လည်းတိုတယ်. ပြီးတော့ မယုံကြည်နိုင်စရာတွေလည်း ဖြစ်နေတယ်. တစ်ယောက်ယောက်ဝင်ရှုပ်သွားတာ သေချာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ခံပြင်းနေကြတယ်. အဲဒီ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို သွားကြည့်တော့လည်း သူက ဘလော့ဂ်ရေးတာကို နားလိုက်ပြီတဲ့.
အားလုံးကို ဆက်စပ်ကြည့်လိုက်တော့ အဖြေတစ်ခုရတယ်.
သူ့ကို အားလုံးက ၀ိုင်းမေးကြလိမ့်မယ်. ဒါတောင် ကျွန်တော်တို့ မသိလိုက်တဲ့ တစ်ခြားဘလော့ဂါတွေရဲ့ Cbox တွေ ရှိနိုင်ဦးမယ်လေ. ဒါကြောင့် သူ့ခမျာ စိတ်ရှုပ်ပြီး ဘလော့ဂ်လောကကို နှုတ်ဆက်သွားတာ ဖြစ်ရမယ်ပေါ့. သူ့အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်းသိတယ်. သူက သိပ်ကူညီတတ်တဲ့သူဗျ. စာအုပ်ကိစ္စအတွက် ဒီဇိုင်းတွေ ဆွဲပေးလား ဆွဲပေးရဲ့. ဘလော့ဂါအစည်းအဝေး ဆိုရင်လည်း တက်တက်ရောက်ရောက် ဆွေးနွေးလား ဆွေးနွေးရဲ့. ဘလော့ဂါတွေအတွက် အကျိုးပြု ပို့စ်လေးတွေလည်း ရေးလားရေးရဲ့. အဲလိုလူစားမျိုးဗျ
ဒီလို အောက်တန်းကျ ယုတ်မာတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ဘယ်တော့မှ သူမလုပ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်နေတယ်လေ. (မင်းကို ငါတို့ အားလုံး ယုံကြည်ပါတယ် သူငယ်ချင်း. စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့…)
ဘလော့ဂ်ရေးတာကိုလည်း သူအရမ်းခင်တွယ်တာ. သူ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ တန်းပလိတ်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးတော့ ကောင်းအောင် ခဏခဏ ပြုပြင်နေတာ. ပြောရရင် ဘလော့ဂ်ရေးတာကို သိပ်ခင်တွယ်တဲ့သူဗျ. ခုတော့ သူ့လို လူစားမျိုးက ဘလော့ဂ်ရေးတာကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာတဲ့ အထိ ဖြစ်သွားရပြီဆိုတော့ ဒီကိစ္စကို ပြီးပြီးရော လျစ်လျူမရှုသင့်တော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်လာမိတယ်. ဒါကြောင့်မို့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်သွားပါတယ်
ကဲ. လိုရင်းကိုပဲ ဆက်စဉ်းစားလိုက်ရအောင်. ကျန်တဲ့ ဘလော့ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမများလည်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီပြဿနာမျိုး ကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့အတွက် အချင်းချင်း အထင်အမြင် လွဲမှားမှုတွေ မဖြစ်ရအောင် သေသေချာချာလေး ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ.
IP Address ဆိုတာဘာလဲ.
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ လူမှာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နဲ့ တစ်ဦးချင်းကို သတ်မှတ်ခွဲခြား ထားသလိုပဲ ကွန်ပြူတာကိုလည်း စက်ရုံကထုတ်ကတည်းက သူ့ရဲ့ အိုင်ပီလိပ်စာကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်.
ဒါပေမယ့် IP Address ကို ပြောင်းယူလို့ ရတာလည်း ရှိပါသေးတယ်. ဒါကြောင့် IP Address ကို ယုံကြည်လို့ မရပါဘူး.
ဒါကတော့ မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ်မှာ Cbox Abuse နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမြတ်မင်းဟန်က မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးတာပါ.
Internet လောကကြီးမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ Identity ကို အမြဲပုံသေယူမရတော့လည်း ခက်တာပဲ။ အခုကိစ္စကို ကြည့်ရင် ဒီလူရဲ့ Identity က သူ့ရဲ့ IP. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ IP ကို သူကိုယ်တိုင်က ပြောင်းလို့ရနေတော့ ဘယ်နှဲ့လုပ်မလဲ။ သူမဟုတ်တာလာရေးလို့ ဖျက်ပစ်ရုံကလွဲပြီး မတတ်နိုင်ပါဘူး။
IP ကို ban တာကတော့ မကောင်းပါဘူး။ မတော်လို့ အဲ့ဒီ့ မြင်ရတဲ့ IP က abuse လုပ်သွားသူရဲ့ IP မဟုတ်ပဲ သူ့ ISP (internet service provider) ရဲ့ proxy IP ဖြစ်နေခဲ့ရင် အဲ့ဒီ့ Proxy အောက်မှာရှိနေတဲ့လူမှန်သမျှ ထိသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ Singapore မှာ File Sharing Site တွေသွားတိုင်း "Sorry, You've reached your daily download limit" ဆိုတဲ့ message မျိုးဟာ အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ပါ။
အဲဒီ့ထဲက ISP ရဲ့ IP အကြောင်းကို ဆက်ပြောလိုပါတယ်.
အသေးစိတ်ကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး. လိုရင်းကိုပြောရရင်တော့ ISP (Internet Service Provider) က သူ့ Network ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ client computer တွေရဲ့ IP တွေအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Cyber Café တွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်. Computer ၁၀ လုံးရှိလို့ အိုင်ပီ ၁၀ ခုရှိမယ်ဆိုပါတော့. ဒါပေမယ့် Cyber Café ရဲ့ Network IP Address ကတော့ တစ်ခုတည်းပါ. ဒါကြောင့် User ၁၀ ယောက်က သုံးပေမယ့်လည်း IP တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပဲ လာပေါ်နေတတ်ပါတယ်.
ဒါက Cyber Café နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြတာပါ. နောက်တစ်ခုကတော့ အိမ်ကနေ Inernet သုံးနေတဲ့ User နဲ့ တစ်ခြားတစ်နေရာကနေ သုံးနေတဲ့ User ရဲ့ IP လည်း Conflict ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ BaganNet က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ISP မို့ပါ. သူ့ရဲ့ IP အောက်မှာ Client Server တွေကို IP အမျိုးမျိုး ချပေးထားပါတယ်. ဒါပေမယ့် ထွက်လာတဲ့ IP ကျတော့ တူချင်တူနေတတ်ပါတယ်. (ဒီကိစ္စကို အသေးစိတ်ကျကျတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး. Logic အရပဲ တွေးကြည့်မိတာပါ. အဲဒါဝန်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ.)
Conclusion ဆွဲရရင်တော့ IP လိပ်စာတစ်ခုတည်း ကြည့်ရုံနဲ့ ဒီလူဖြစ်တယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး. ပြီးတော့ အဲဒီ့လိုမျိုး မဟုတ်တရုတ်တွေ ရေးလာတတ်တဲ့ IP ကိုလည်း Ban တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး. အဲဒီ့ IP က ISP ရဲ့ IP ဖြစ်နေရင် အဲဒီ့ဆိုင်မှာ လာသုံးတဲ့ User တွေ အားလုံးကို Ban လိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်. မကြိုက်ရင် Msg ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ. အဲဒီ့လောက်ပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်.
ဒီလောက်ဆိုရင် Cbox Abuse အကြောင်း နည်းနည်းလောက် စောင်းပါးရိပ်ခြည် သိလောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
သူကတော့ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွားပုံပေါ်တယ်. မနက်ခင်း ၅ နာရီထိုးခါနီးလောက်ထိကို ပို့စ်တွေ ဆက်တိုက်တင်ပေးခဲ့ပြီး နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ သွားခဲ့တယ်. အင်းပေါ့လေ. သူလည်း တစ်ဦးချင်းကို ဘယ်ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင် တော့မှာလဲ. တစ်ဦးချင်းစီကလည်း ထူပူနေတော့ ဒီလောက်ထိ ဘယ်စဉ်းစားနေမိ တော့မှာလဲ. သူ့ကိုပဲ ၀ိုင်းပြီးမေးကြတော့တာပေါ့ဗျာ.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ. ခုဆိုရင်တော့ အားလုံး သံသယတွေ ကင်းရှင်းလောက်ပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်.
ဒါကြောင့် မြန်မာဘလော့ဂါတွေကို တတ်အားသမျှ ကူညီပေးနေတဲ့၊ ဖော်ရွေခင်မင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့၊ ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းကို သိပ်မြတ်နိုးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို သွားလည်ပြီးတော့ ဘလော့ဂ်ပြန်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးကြပါလို့ ဒီပို့စ်လေးရေးသားပြီး မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
လောကကို စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့ ဗြဟ္မ၀ိဟာရ တရားလေးပါး ရှိပါတယ်. အဲဒါတွေကတော့ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားပါးကို ကျင့်သုံးနိုင်သမျှ မိမိကိုယ်စိတ် ချမ်းသာပြည့်စုံခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်.
ဒီတရားလေးပါးကို ကျွန်တော်တို့ ခုဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စလေးမှာ သုံးကြည့်လိုက်ရ အောင်လား…
ကိုယ့်ကို အမနာပ လာပြောတဲ့သူကို မေတ္တာပွားပေးလိုက်ပါ. သူဒီလိုလုပ်လိုက်ရလို့ ဘာမှလည်း ရသွားတာမဟုတ်ဘူး. သူ့စိတ်ချမ်းသာမှုလေးတစ်ခု အတွက်နဲ့ တစ်ခြားသူတွေကို စိတ်ဆင်းရဲစေခဲ့တယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ အတ္တက ကိုယ့်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားကို အရိပ်မထိုးမိပါစေနဲ့လေ.
သူဟာ ဒီလိုမျိုး တစ်ခြားသူတွေကို နှိမ့်ချပြီး လက်လွတ်စပယ် ပြောပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်မှုကို ရှာနေရသူပဲလို့ ဖြေတွေးပြီး ကရုဏာပွားပေး လိုက်ပါလေ.
သူဖျက်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဆက်လက်ရိုင်းပင်း ချစ်ခင်မြဲ ချစ်ခင်သွားမှာပါပဲ. သူ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရဲ့ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးထားရှိတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထိတွေ့ခံစားခွင့်ရလိုက်တယ်လို့ တွေးပြီး မုဒိတာပွားများပြီး ၀မ်းမြောက်လိုက်ပါ လေ.
ဒီလောကကြီးမှာ သုံးလောကထွတ်ခေါင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတောင်မှ မချွတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ နတ်လူသတ္တ၀ါတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ်. သူတုိ့ကို ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ပေယျာလကံထားပြီး ဥပေက္ခာပြုတော်မူခဲ့ရတယ်. (ဒေ၀ဒတ်လည်း ရှု)
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲလည်း အရာရာကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်မထားဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ပကတိကြည်လင်နေတဲ့ စိတ်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီး တရားဖျက်သူကို ဥပေက္ခာပြုပြီး အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလေ..
ရေမပြည့်သား၊ အိုး၏ပမာ၊ သွက်သွက်ခါရှင့်၊ နှုတ်လျှာရွှင်ရွှင်၊ မိုးဖျင်ဖျင်သို့၊ ဖြင်ဖြင်စကား၊ တဘွားဘွားနှင့်၊ လူကြွားပြောတန်၊ လူသန်မကြွား၊ မောင်မှတ်သားလော့၊ မြင်ကြားသုတ၊ ဥာဏအရာ၊ အလိမ္မာနှင့်၊ ပညာသိမြော်၊ ရှိပါသော်လည်း၊ တော်မှန်ဖြောင့်ခဲ၊ ၀မ်းထဲသစ္စာ၊ တော်ဖြောင့်ပါလည်း၊ လိမ္မာနည်းပါး၊ ဥာဏ်မြင်ရှားခဲ့၊ ရှည်လျားရောယှက်၊ လူ့ထဲနက်ကို၊ ပေါင်းဖက်သမှု၊ သိအောင်ပြုလော့. (စာ - ၂၉၃)
ဗြဟ္မစိုရ်လေးဆူ၊ တရားဟူသည့်၊ နတ်လူချစ်ဆေး၊ ရှူတိုင်းမွှေးကို၊ မြတ်လေးဆောင်လွယ်၊ ကင်းမပယ်နှင့်၊ ၀မ်းဝယ်မပြတ်၊ ထားစေတတ်လော့…
(စာ - ၃၁၈)
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘလော့ဂ် ပါ. သွားရောက်အားပေးပြီး လက်တွဲခေါ်ယူကြ ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ.
ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ ပေါက်ကရလာရေးတတ်သူတွေရဲ့ အိုင်ပီများကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုရင် Ban မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ တစ်ခါတည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ.
ကိုယ့်တရားကို ဆက်လက်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ.
ဒီစာအုပ်လေးကို ကိုဈာန် ရဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ယနေ့ခေတ် သတိတရားထားဖို့ အခြေ
ယနေ့ထက်တိုင်အခြေ. ဩော် မမေ့တဲ့နိုင်ပါပေ..
ဒီသီချင်းလေးကို မေလှမြိုင်က ဆိုထားပါတယ်. ရေးသူနာမည်ကိုတော့ သိပ်မသေချာဘူး ဖြစ်နေတယ်. သိသူများက ဖြေကြားပေးကြပါ ခင်ဗျာ.
ဒီသီချင်းလေးစာသားများ မှန်ကန်စေရန်အတွက် ကူညီတိုက်စစ်ပေးခဲ့တဲ့ အစ်မခင်မင်းဇော်တို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ အစ်မမေငြိမ်းတို့ကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
ဓာတ်ပုံကိုတော့ စိုးဇေယျဘလော့ဂ်မှ ရယူပါတယ်.
ဘလော့ဂါတစ်ချို့က အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဘာပို့စ်မှ မတင်ဘဲ ငြိ်မ်နေကြဖို့ တိုက်တွန်းအကြံပြုပါတယ်. ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ. ဒါပေမယ့် အာဇာနည်ဘလော့ဂ်လေးမှာတော့ လာရေးပေးကြဖို့ တစ်ဆက်တည်း မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါရစေ. အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက် ရည်စူးပြီး လုပ်လိုက်တဲ့ အာဇာနည်ဘလော့ဂ်မှာ မိမိတို့ရဲ့ မျိုးချစ်ဝိညာဉ်များ ရှင်သန်ကိန်းအောင်းနိုင်ပါစေ…
တို့ဗမာ… တို့ဗမာ.. တို့ဗမာ…
ပေတစ်ရာပေါ်မှာ စီးတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဘူး
(မပြေးသော် ကံရာရှိမဟုတ်လား. အားလုံးကို ကြိုတွက်ထားတာ မမှားနိုင်ပါ ဘူးလေ.)
ဘလော့ဂ်တော်တော်များများမှာ Read More... တို့၊ ဆက်ဖတ်ရန်တို့၊ Expand... တို့ စသည်ဖြင့် လုပ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို ခေါက်သိမ်းထားတာ တွေ့ဖူးမှာပါ. အဲဒါကို Peekaboo post လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်. ခု အဲဒီ့ Peekaboo Post လေးတွေ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ. Coding တွေကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ Ramani ရဲ့ Blog မှာလည်း ကျွန်တော်သွားပြီး အသိပေးခဲ့ပြီးပါပြီ. ခုနက သူ့ Blog ကို သွားပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်တော့ ပို့စ်တစ်ခု အသစ်တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်.
အဲဒီ့ပို့စ်ကို ခု ဘာသာပြန်ပြီး ရေးပေးနေပါတယ်. ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Template ကို ဒီတိုင်းပဲ သုံးနေကြတာမို့ သိပ်ပြင်စရာ မလိုပါဘူး. Neo Template သုံးနေသူများအတွက်တော့ ခဏစောင့်ဖတ်ပေးပါနော်. ဆက်တင်ပေး ပါမယ်.
Neo Template ကို သုံးနေသူများကတော့ မိမိတို့ အရင်သုံးနေတဲ့
လို့ ပြန်ပြောင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
နောင်တစ်ချိန် ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုး ထပ်ပြီးမကြုံရအောင်လို့ သူ့ရဲ့ Hackosphere.js နဲ့ Neo.js ဖိုင်လေးတွေကို Download လုပ်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ Googlepages မှာ တင်ထားလိုက်ပါတယ်. အားလုံးစိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးနိုင်ပါပြီ...
ကိုသားကြီး သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတွေထဲက အမှတ်တရ ရင်ထဲမှာ ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ အားမာန်တက်ကြွစေခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ကိုသားကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း အမှတ်တရ အနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
Download လုပ်ချင်သူများ Rt Click လုပ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်.
ငါနဲ့ ငါ့နေ့များ ကြည်လင်ပြီး နေပါစေ
ငါနဲ့ ငါ့အိပ်မက် ထပ်တူရင်း စိတ်ကျေနပ်မိ…
ငါ့စိတ်ငါ့ရဲ့အတွေး ညီမျှခြင်း တူညီပါစေ
သေချာလား တွက်ဆရင်း ခိုင်မာမှုရဲ့ အဖြေကိုလေ
မျှော်လင့် တောင့်တခြင်းဝေးနေလည်း ငါရှာမှာပါ
မယုံဘူး ကြားလူခံ ငါ့ရဲ့ တွေးခေါ်မှုများ
လက်တွေ့မှာ ယုံတမ်းလို့ သေချာမှ အဖြေရှာမယ်
သေချာလား တွက်ဆရင်း ခိုင်မာမှုရဲ့ အဖြေကိုယူမယ်
အချိန်တိုင်း စဉ်းစားပြီး ငါ့ရဲ့လမ်းငါရှာမယ်
ငါနဲ့ ငါ့ရဲ့ ခရီး လှပအောင် စိုက်ပျိုးသွား
ငါ့နဲ့ ငါ့ဘ၀ ငါ့ရဲ့ဇာတ်များကို တွက်ဆနေရင်း
အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်သွားရင်း ရှေ့ဆက်လျှောက်နေဆဲ
တကယ်လို့ ဒီဓာတ်ပုံကို မတင်သင့်ဘူးလို့ ယူဆရင်လည်း ပြောပါခင်ဗျာ. ကိုသားကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ လိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ခံစားကြည့်လို့ ရနိုင်အောင် တင်ပေးထားတာပါ. လူမှုရေးရှုထောင့်ကနေ မသင့်တော်ဘူး ထင်ရင်လည်း ပြန်ဖြုတ်ပေးပါမယ်...
သီချင်းကို ကိုမင်းကျော် ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေ ရယူပါတယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုမင်းကျော်...
Blogger များအားလုံးကို တစ်ခု သတိပေးစရာ ရှိလို့ပါ.လောလောဆယ်မှာ Peekaboo ပို့စ်တွေ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး. ဘာလို့လဲဆိုတော့ Peekaboo ပို့စ်လေးတွေကို Hack လုပ်နည်း ရေးပေးခဲ့တဲ့ Ramani က သူ့ရဲ့ Hosting Site ကို ပြောင်းဖို့ စိုင်းပြင်းနေလို့ပါပဲ. Site အသစ်နာမည်က http://bvibes.com/ ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် သူရေးခဲ့တဲ့ Hack တွေရဲ့ Anniyalogam.com နေရာတွေမှာ အသစ်လုပ်လိုက်တဲ့ site နာမည်ကို ပြောင်းထည့်ပေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ ထည့်ထားတဲ့ Coding မှာက
'http://www.anniyalogam.com/widgets/hackosphere.js' လို့ <head>
မပိတ်ခင်နားလေးမှာ ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်. အဲဒါကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းကြည့်ပါတယ်
အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဟတ်ဟတ်ဟတ်... သူပေးတဲ့ Site ကို ၀င်ကြည့်တော့လည်း 404 ကြီးနဲ့တွေ့လာတယ်ဗျ. ဩော်. ဘာမှ မရှိရင် ပြတတ်တဲ့ Error လေ. သိတယ်မလား. ဂဏန်းပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး. ထိုးချင်လည်း ထိုးကြပေါ့ဗျာ.
အဲဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ Blog မှာ ကော်မန့်ရေးပြီး ကျွန်တော်ဝင်အော်ခဲ့ပါတယ်. သူ့ရဲ့ ကော်မန့်ကို ပြန်စောင့်ဦးမယ်ဗျာ. လောလောဆယ်မှာ ဘလော့ဂါများအနေနဲ့ PeekaBoo ပို့စ်ပုံစံ မရေးဘဲ အရင်အတိုင်းပဲ ဖြန့်ပြီး ရေးကြပါလို့ အကြံပေးပါရစေ. နောက်ပိုင်း ပြင်ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို ပြန်ပြီး update လိုက်လုပ်ရုံပဲပေါ့ဗျာ. ဟုတ်ဘူးလား…
If you want to see my comment at Ramani’s blog, check this link!
တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက် ထပ်စောင့်ပေးပါ. Ramani က သူ့ဘလော့ဂ်ကို မကြာခဏ ၀င်စစ်ဖြစ်မှာပါ. ဒီတစ်ပါတ် ဒီကောင် Party တက်စရာလည်း မရှိဘူးတဲ့ Hosting Site အသစ်အတွက် ပိုက်ပိုက်စုနေတယ် ကြားတာပဲ.
Anniyalogam ကို ဆက်သုံးဖြစ်ဖို့ သူ့ကို တိုက်တွန်းနေကြတာတွေလည်း ဖတ်ရပါတယ်. ဆက်သုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှ ပြင်စရာ မလိုတော့ပါဘူး. ဒီတိုင်းပဲ ထားလိုက်ပါ. အိုကေသွားပါလိမ့်မယ်. ဘလော့ဂ်ကြီး ပျက်သွားပြီထင်ပြီး မှိုင်တွေနေကြသူများ စိတ်အေးချမ်းသာ ရှိကြပါစေဗျာ…
အားလုံးကို အကူအညီတစ်ခု တောင်းခံပါတယ် ခင်ဗျာ. သီချင်းတောင်းချင်လို့ပါ
ထူးအိမ်သင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေ.. မဇ္ဈိမ ဆိုလားဘာလားပဲ. စာသားလေးက ဒီလိုဗျ
(မဇ္ဈိမဒေသကို ပူဇော်ကြ… မဇ္ဈိမဒေသကို ဦးညွှတ်ကြ )၂
မြေပြင်ပေါ်ရေပြင်ပေါ်မှာ မဇ္ဈိမရဲ့ အငွေ့အသက်များလေ
လူတွေကို လူတွေကို လမ်း လမ်း လမ်း ပြပေးနေ…
အဲဒီ့စာသားလေးတွေပါတယ်. မှတ်မိကြမလားမသိဘူး. ထွက်တာကြာပြီဗျ ဘယ်ခွေထဲကမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး. သီချင်းကိုလည်း အပြည့်အစုံ မမှတ်မိတော့ဘူး.
အဲဒါ တစ်ယောက်ယောက်ကများ သိရင် သီချင်းစာသားလေးရယ်၊ သီချင်းလေးကို Download လုပ်လို့ ရနိုင်မယ့် နေရာလေးရယ်ကို ညွှန်ပြပေးစေလိုပါတယ်.
ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ပို့စ်တစ်ခု အတွက်မို့ပါ. ကူညီတဲ့သူကို ပို့စ်ထဲမှာ credit ပေးထားပါမယ် ခင်ဗျာ.
နောက်တစ်ခုကတော့ လောကနတ်ရဲ့ အကြောင်းကို သိသလောက်လေး ပြောပြပေးကြပါ. သူရွတ်လေ့ရှိတဲ့ ဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိတယ် ဆိုတာမှတ်သား ဖူးပါတယ်. သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာလေး နှစ်ခု ရှိပါတယ်. ဘာလဲဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ မမှတ်မိတော့ပါဘူး. အဲဒါလေးကိုလည်း တစ်ချက်လောက် ကူညီဖြေကြားပေးကြပါ ခင်ဗျာ. လောကနတ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဆိုတာလည်း ပြောပြပေးနိုင်ရင် ကျေးဇူးပါ. ဒါဆိုရင် Google မှာ သူ့အကြောင်းပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်လို့ ရသွားပြီပေါ့ဗျာ.
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီလိုစာပေဗဟုသုတတွေကို ရနိုင်ဖို့က ဒီဘလော့ဂ်ကနေ အကူအညီတောင်းခံရုံက လွဲလို့ တစ်ခြားနည်းလမ်း မရှိတော့လို့ပါ.
မင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲက လက်ကျန်အချစ်တွေကို
မင်းရဲ့ ချစ်ရည်ရွှမ်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းညိုညိုလေးတွေကို
နှလုံးသားကို မြဲမြံနေအောင် သော့ခတ်ထားတယ်
မင်းဝင်လာနိုင်ဖို့ ငါ့ရဲ့နှလုံးသားပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လို့
မင်းကိုကြိုဆိုဖို့ ငါ့လက်အစုံကို ဆန့်တန်းလို့
မင်းလာမယ့်လမ်းကို မမှိတ်မသုန် ငေးကြည့်လို့
ချစ်သူလို့ မင်းခေါ်လိုက်မယ့်အသံကို နားစွင့်ထားလို့
နေကောင်းကြလားခင်ဗျ. ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ Video တစ်ချို့ရယ်၊ အရင်တုန်းက တင်ပေးဖူးခဲ့တဲ့ Video လေးတွေရယ်ကို မြန်မာပြည်က ဘလော့ဂါကိုကိုမမတို့ မကြည့်ရှုနိုင်ဘူးဆိုတာ သိရပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ www.youtube.com ကို ပုဂံနက်က မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအတွက် စေတနာဗလပွနဲ့ ဘန်းထားလို့ပါပဲ. ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ ဒီ Site လေးတစ်ခုကို တွေ့တယ်. ခု Video လေးတစ်ခု အစမ်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်. မြန်မာပြည်က ဘလော့ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမများ ကြည့်ရှုလို့ ရမရ ကော်မန့်ထဲမှာ ၀င်ရေးပြီး အသိပေးကြပါခင်ဗျာ.
ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ သောကြာနေ့နဲ့ တနလာင်္နေ့ ကွာခြားပုံ လို့ အမည်ရပါတယ်. ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော့…
Difference between Friday and Monday
Blogger Site က ပေးထားတဲ့ Template တွေက2Columns တွေချည်းပါပဲ. အဲဒါကို3Column လုပ်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင် column ထပ်တိုးနိုင်သလို အသင့်လုပ်ပြီးသား Template များကိုလည်း ယူသုံးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ. Template အသစ်လေးတွေ ထပ်လိုချင်သူများအတွက် ready made လုပ်ထားပြီးသား 2-column-templates နဲ့ 3-column-templates များကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်. အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ…
ဒါကတော့ ကိုမျိုးကျော်ထွန်းပြောပြတဲ့ Sidebar မှာ Column ထပ်ထည့်တာကို လေ့လာနိုင်တဲ့ လင့်ခ်များပါ.
ဒါကတော့ ကိုဖိုးချမ်းမျှဝေတဲ့ 3-column-templates များနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လင့်ခ်များပါ.
New Blogger Templates:
Old Blogger Template : Brilliant Interface
ဒါကတော့ ကိုဖိုးဇင်က မြန်မာဘလော့ဂါများကို သိစေချင်တဲ့ လင့်ခ်များပါ.
အထက်ပါ လင့်ခ်များကတော့ မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ် မှာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးထား ကြတဲ့ ဖိုရမ်မာ ကိုမျိုးကျော်ထွန်း၊ ကိုဖိုးဇင် နဲ့ ကိုချမ်းမြစိုး တို့ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုများပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
မိမိတို့ သိထားတဲ့ Free Template Site ကောင်းကောင်းလေးများ ရှိခဲ့ရင်လည်း အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများစေဖို့အတွက် ဒီပို့စ်လေးရဲ့အောက်မှာ လာရောက်ပြီး မျှဝေပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.